|𝐎𝐧𝐞 + 𝐎𝐧𝐞=1|(𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞𝐝)
ငါတို့ဇာတ်လမ်းကအနာကျင်ရဆုံးဖြစ်လာမှာလား။ ငါကတော့အလှပဆုံးဇာတ်လမ်းလေးလို့ပဲထင်တယ်။ __________________...
It's beenawhole year since Ga On met Yuhan in the hall after that explosion. "He just showed his...
Imaginesepreferences de carrosel
Imagines dos personagens de carrosel Pedidos abertos!! -Personagens: 🌹Marcelina 🌼Margarida 🌰Ci...
"မတုံးစမ်းပါနဲ့Kim Taehyungရဲ့' 'သခင်ဟာအပြစ်ပေးခဲ့ပါတယ်အနူးညံ့ဆုံးသော ချစ်ခြင်းတရားတွေနဲ့ပေါ့'
Siblings [Kim Sunoo FF]✔️
ᴵⁿ ᵗʰⁱˢ ᵇˡᵃᶜᵏ ᵈᵃʳᵏⁿᵉˢˢ ʸᵒᵘ ˢʰⁱⁿᵉ ᵗʰⁱˢ ᵐᵘᶜʰ
SWEET ALAN [ON GOING]
Menjadi bodyguard untuk gadis yang manja? Bagaimana jadinya hidup Alan yang awalnya tenang, dan ten...
[Sci-Fi / Fantasy / Romance ] Aurora Rosa is bonded—but not by choice, her existence is tied to a...
Various X chubby fem reader one shots
Updates are slow! Lots of oneshots All characters I write smut about are 18+
ငါ့ကိုငြင်းရင် မင်းနှုတ်ခမ်းတွေကိုပေါက်ပြဲအောင်သာမက အသက်ရှူကျပ်အောင်ပါနမ်းရှိုက်‌ပစ်မှာနော် Kim Tae...
ငါတို့ဇာတ်လမ်းကအနာကျင်ရဆုံးဖြစ်လာမှာလား။ ငါကတော့အလှပဆုံးဇာတ်လမ်းလေးလို့ပဲထင်တယ်။ ________________________________________ လူတွေကမင်းကိုရူးနေတယ်ထင်ကြတယ်နော် မင်းကောပါလားအဲ့လူတွေထဲမှာ ဟင့်အင်းလူတွေကမင်...